Injabulo abahwebi benikelelwa ngemipheme – Bayede News
Injabulo abahwebi benikelelwa ngemipheme
UMKHANDLU waseMzinyathi ubuyise ithemba nokwethenjwa kwawo
by Bayede-News Posted on 3 December 2018 6 December 2018
UMKHANDLU waseMzinyathi ubuyise ithemba nokwethenjwa kwawo emphakathini owakhele lesi sifunda ngokufeza isethembiso owawusenzile ngesikhathi kunezinhlelo zokuhambela imiphakathi kulalelwe izidingo zawo ngasekuqaleni konyaka. IMeya uMnu uPetros Ngubane owayephambili kulezi zinhlelo wazibophezela kubahwebi ngokuthi uzobatakula ngaphansi kwezimo ababesebenza ngaphansi kwazo.
Lapha wayekhuluma ngabahwebi basemadolobheni amakhulu angaphansi koMzinyathi njengeKranskop, iPomeroy, iNquthu, iDundee neTugela Ferry. Maphakathi nenyanga iMeya uNgubane ubuyelile kulo mphakathi lapho eqale khona umkhankaso wokubonelela abahwebi. Umkhankaso uqale edolobheni iKranskop ngaphansi kukaMasipala waseMvoti, wabe usudlulela eNquthu lapho kunikezelwe khona ngemipheme kubahwebi.
Iningi labahwebi kulezi zindawo ngabesifazane abondla imindeni yabo ngemali abayenza ngokudayisa. Uma linile izulu noma libalele likhipha umkhovu etsheni bathwala kanzima ngoba abanayo imipheme okugcina ngokuthi abanye bawavale amabhizinisi abo.
“Siyazi futhi siyaqonda ukuthi siphila esikhathini lapho kuntuleke khona imisebenzi ngendlela exakile, njengoMasipala wesifunda sibone ukuthi ake sifake itshe esivivaneni ngokuhlanganyela noMasipala Basekhaya ukuthi sivuselele abahwebi basemgwaqeni. Ngalokhu sizama ukusungula nokuvuselela izinhlaka ezizobhekelela abahwebi futhi ezizoba umlomo walaba bahwebi.
UNgubane uqhube wathi uMasipala wase-Endumeni usuqalile ngalezi zinhlelo ngokusungula izinhlaka, futhi sebebe nawo umhlangano lapho bebebonisana khona ngezingqinamba sesibe nawo umhlangano lapho besixoxa ngezingqinamba ngokusebenza kwabahwebi. “Sifuna ukuqinisa ubudlelwane phakathi kukaHulumeni nabahwebi ukuze kuqiniswe izinhlaka zokusebenzisana. Sisebenzisana nomasipala basemakhaya ngoba ibona abanengqalasizinda efanele abahwebi” kuchaza uMeya uNgubane.
Uphinde wazobophezela ukuthi i uMkhandlu waseMzinyathi usazoqhubeka nokuxhasa abahwebi uphinde uzame nokuheha abatshalizimali. “Kukhona okuncane esikuphethe namhlanje, sihambile sibuka ukusebenza kwabahwebi sabona bahweba emgwaqeni nasezindaweni lapho abafaka khona imipheme engafanele, ngoba eminye yale mipheme iyingozi kanti futhi ivimba nabatshali zimali nabezokuvakasha. Sibone ukuthi asisize ngokuthenga imipheme emisha, ebukekayo ukuthi izobasiza bahwebe kahle,” kusho uNgubane Uthe lo mkhankaso awumile kepha usazohambela namanye amadolobha angaphansi koMzinyathi.
Abahwebi bahlulekile ukuzibamba injabulo njengoba sekuneminyaka besebenza ngaphansi kwezimo ezinzima. Babonge banconcoza eMkhandlwini ngokubabhekelela okuyinto abathe izosimamisa amabhizinisi abo.
Posted in Ezomphakathi